OTU ESI EDOZI WINE NA UBUNTU - LINUX - 2019
Ịwụnye mmanya na Ubuntu
Dị ka ị maara, ọ bụghị mmemme niile maka usoro ọrụ Windows ahụ dakọtara na nkesa na Linux kernel. Ọnọdụ a mgbe ụfọdụ na-akpata nsogbu ụfọdụ ndị ọrụ n'ihi na enweghị ike ịmepụta ndịrịta ala. Ihe omume ahụ a na-akpọ Wine ga-edozi nsogbu a, n'ihi na e mere ya iji hụ na arụmọrụ nke ngwa kere n'okpuru Windows. Taa, anyị ga-achọ igosi usoro niile dịnụ iji wụnye ngwanrọ a kpọtụrụ aha na Ubuntu.
Tinye Wine na Ubuntu
Iji mezuo ọrụ ahụ, anyị ga-eji ọkọlọtọ "Njedebe"ma echegbula onwe gị, ọ bụghị iwu na ị ga-enyocha iwu niile na onwe gị, n'ihi na ọ bụghị nanị na anyị ga-akọwa banyere usoro nrụnye n'onwe ya, kamakwa ịkọwa ihe niile omume. Ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ usoro kachasị mma ma soro ntuziaka ndị enyere.
Nzọụkwụ 1: Ntọala sitere n'aka ụlọ ọrụ nchịkwa
Usoro kachasị mfe iji wụnye mbipụta ọhụrụ ọhụrụ bụ iji ụlọ ọrụ nchịkọta ọrụ. A na-eme usoro ahụ dum site na ịbanye naanị otu iwu ma yiri nke a:
Gaa na menu ma mepee ngwa ahụ. "Njedebe". Ị nwekwara ike ịmepụta ya site na ịpị RMB na ebe efu na desktọọpụ na ịhọrọ ihe kwekọrọ.
Mgbe ị mepee windo ọhụrụ, tinye iwu ahụ n'ebe ahụsudo apt wụnye wine-stablewee pịa Tinye.
Pịnye paswọọdụ iji nye ohere (ihe odide ga-abanye, ma a gaghị ahụ ya anya).
A ga-amara gị ọkwa banyere ọrụ nke ohere diski, iji nọgide na-ebugharị akwụkwọ ozi D.
Echichi usoro a agwụcha mgbe akara ngosi ọhụụ ọhụrụ pụtara maka ịkọ iwu.
Tinyemmanya - ntụgharịiji hụ na usoro nhazi ahụ ziri ezi.
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe isi tinye Wine 3.0 na usoro ọrụ arụmọrụ Ubuntu, mana nhọrọ a anaghị adabara ndị ọrụ niile, yabụ anyị na-atụ aro ka ị gụọ ndị na-esonụ.
Usoro 2: Jiri PPA
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị onye mmepụta ọ bụla nwere ohere ịkwado nsụgharị software ndị ọhụrụ na oge na nchekwa ụlọ ọrụ (nkwụnye nchekwa). Ọ bụ ya mere eji mepụta ụlọ akwụkwọ pụrụ iche iji chekwaa ebe nchekwa ndị ọrụ. Mgbe a hapụrụ Wine 4.0, jiri PPA kachasị mma.
Mepee njikwa ma kpoo iwu ahụ n'ebe ahụsudo dpkg - addd-architecture i386nke a chọrọ iji gbakwunye nkwado maka ndị nhazi i386. Ubuntu ndị nwe 32-bit nwere ike ịkwụsị nzọụkwụ a.
Ugbu a, ị ga-agbakwunye ụlọnga na kọmputa gị. Nke a na-eme nke mbụwget -qO-dd.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key tinye -.
Wee pịnyesudo apt-add-repository 'deb //dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'.
Akwụsịla "Njedebe", ebe ọ bụ na a ga-anabata ngwugwu ma gbakwunye.
Mgbe ọ gbasịrị mgbakwunye faịlụ nchekwa ahụ, a na-arụ nrụnye n'onwe ya site na itinyesudo apt wụnye winehq-stable.
Jide n'aka iji gosi ọrụ ahụ.
Jiri iwuwinecfgiji lelee ọrụ nke software.
Ị nwere ike ịwụnye mgbakwunye ndị ọzọ iji na-agba ọsọ. Ọ ga-agba ọsọ na-akpaghị aka, mgbe nke a ga-amalite window window Wine, nke pụtara na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Nzọụkwụ 3: Wụnye Beta
Dị ka ị mụtara site na ozi ahụ dị n'elu, Wine nwere mbipụta anụ ọkụ, ya na ya, beta na-etolite, ndị na-arụ ọrụ nke ọma nwalere ya tupu a hapụ ya maka iji ya eme ihe. Ejiri ụdị nsụgharị ahụ na kọmpụta na-arụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu anụ ahụ:
Gbaa ọsọ "Njedebe" ụzọ ọ bụla dị mma ma jiri iwu ahụsudo apt-ga-esi tinye --install-na-atụ aro ka ịṅụ mmanya.
Kwenye na mgbakwunye faịlụ ma chere ka echichi ahụ mezue.
Ọ bụrụ na nyocha ahụ adịghị adabara gị maka ihe ụfọdụ, wepụ yasudo apt-get purge wine-staging.
Nzọụkwụ 4: Nzukọ onwe onye sitere na isi koodu
Ụzọ ndị gara aga iji wụnye nsụgharị abụọ nke mmanya agaghị arụkọ ọrụ, Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ ngwa abụọ n'otu oge, ma ọ bụ ha chọrọ itinye mgbakwunye na mgbanwe ndị ọzọ n'onwe ha. N'okwu a, nhọrọ kachasị mma ga-abụ ịmepụta Wine gị site na koodu ntinye dị.
Mbụ mepee menu ma gaa "Mmemme na mmelite".
N'ebe a, ị ga-akọrọ igbe ahụ "Usoro Iyi"iji mee mgbanwe ndị ọzọ na ngwanrọ ahụ.
Iji tinye mgbanwe ahụ ga-achọ paswọọdụ.
Ugbu a site na "Njedebe" budata ma wụnye ihe niile ị chọrọ site nasudo apt build-dep mmanya-stable.
Download koodu isi nke nsonaazụ ahụ achọrọ site na iji ọrụ pụrụ iche. Na njikwa, tinye iwusudo wget //dl.winehq.org/wine/source/4.0/wine-4.0-rc7.tar.xzwee pịa Tinye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye nsụgharị ọzọ, chọpụta ebe nchekwa dị na Internet ma tinye adreesị ya kama //dl.winehq.org/wine/source/4.0/wine-4.0-rc7.tar.xz.
Wepụ ọdịnaya nke ebe nchekwa na ebudatarasudo tar xf wine *.
Wee gaa ebe e kere eke.cd mmanya-4.0-rc7.
Download faịlụ nkesa ndị dị mkpa iji wuo usoro ihe omume ahụ. Na nsụgharị 32-bit jiri iwu ahụsudo ./configure, na 64-bitsudo ./configure --enable-win64.
Gbaa usoro iwu ahụ site na iwu ahụmee. Ọ bụrụ na ịchọtahie na ederede "Access anabataghị", jiri iwu ahụsudo anamịmalite usoro ahụ na mgbọrọgwụ-ikike. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-eburu n'uche na usoro nchịkọta ahụ na-ewe oge dị ogologo, ịkwesịrị ka ị ghara iji ike gbanyụọ njikwa ahụ.
Wụnye onye na-enyocha yasudo checkinstall.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịwụnye mgbakọ ahụ dum site na ịba uru site na ịbanye na akaradpkg -i wine.deb.
Anyị na-elele ụzọ ntinye nke mmanya Wine na-arụ ọrụ na nsụgharị ọhụrụ nke Ubuntu 18.04.2. Enweghị nsogbu ị ga-enwe ma ọ bụrụ na i soro ntuziaka ahụ ma tinye iwu ziri ezi. Anyị na-atụ aro ka ị ṅaa ntị n'ịdọ aka ná ntị ndị na-apụta na njikwa ahụ; ha ga - enyere gị aka ịchọpụta njehie ma ọ bụrụ na ọ na - eme.